ဗိုက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သားသား၊ မီးမီးလေးတွေက ဘယ်လို အခြေအနေတွေကို မုန်းလဲ? - For her Myanmar
ဗိုက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သားသား၊ မီးမီးလေးတွေက ဘယ်လို အခြေအနေတွေကို မုန်းလဲ?
မသိဘဲ လုပ်မိနေတာတွေ ရှိရင် ခုပဲ ရပ်လိုက်တော့နော်…
ဗိုက်ထဲက မမွေးသေးတဲ့ ကလေးတွေက ချစ်တတ် မုန်းတတ်လို့လားလို့ ယောင်းတို့က မေးလာစရာ ရှိပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကတော့ ဟုတ်ကဲ့ ချစ်တတ်၊ မုန်းတတ်ကြပါတယ် ဆိုတာပါပဲ.. တကယ်တော့ အက်ဒ်မင်တို့တွေဟာ မွေးကတည်းက အသိစိတ်ပါလာပြီးသားပါ.. လူကြီးတွေလောက် မမှတ်မိတာပဲ ရှိတာပေါ့နော်.. ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ Mom Junction မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဗိုက်ထဲက ကလေးလေးတွေ မကြိုက်တဲ့အရာတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ ယောင်းတို့ရေ…
၁။ မိခင် အူလိုက်သည်းလှိုက်ရယ်ခြင်း
မိခင်လောင်းက ပျော်ရွှင်တတ်တာ ကောင်းပါတယ်။ တစ်ခါ ပြုံးရင် တစ်ရက် အသက်ရှည်တယ်လို့ ဆိုရလောက်အောင် ပျော်ရွှင်ခြင်းက လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အရမ်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုက်ထဲက ကလေးကတော့ အူလှိုက်သည်းလှိုက်ရယ်မောခြင်းကိုတော့ ကြိုက်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီလိုရယ်တာ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင် ကိုယ့်ကို ဖောင်းနေတဲ့ လေအိတ်တစ်ခုထဲမှာ ထည့်ထားပြီးအိတ်ကို ရမ်းခါနေသလိုမျိုးပါပဲတဲ့။ ကဲ.. အခွီသန်တဲ့ မာမီလောင်း ယောင်းယောင်းတွေ သတိထားကြမေ 😛
၂။ ဗိုက်ကို အမြဲ ပွတ်နေခြင်း
မွေးခါနီး အချိန်မှာ ကလေးကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ရတာ ကြည်နူးစရာပါ။ ကလေးလေးကလည်း သဘောကျမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ကိုယ်တွယ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ကလေး ငြိုငြင်တာ ခံရပါတော့မယ် 😛 အထဲမှာ ကလေးဘယ်လိုနေနေမှန်း မသိနိုင်တဲ့အတွက် ကလေးကို အမြဲလိုလို ထိတွေ့နေတာမျိုးကိုတော့ လျှော့သင့်ပါတယ်နော်.. ကိုယ့်တောင် တစ်ချိန်လုံး လာကိုင်နေရင် မကြိုက်ဘူးမလား 😀
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ယောင်းလည်း လမ်းထဲမှာ ရုတ်တရက် ဟွန်း အကျယ်ကြီးတီးလိုက်တာမျိုးတို့၊ လော်သံနဲ့ နှိပ်စက်တာတို့ မကြိုက်ဘူးမလား.. ကလေးတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ သူတို့မှာ ကြားနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိတဲ့အတွက် အသံကျယ်လောင်တဲ့အရာတွေကို မုန်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်က ဆိတ်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့နေရာမှာ နေထိုင်သင့်ပါတယ်။
Related Article >>> ကလေးငယ်တွေရဲ့ အိပ်ယာခင်း၊ စောင်၊ ခေါင်းအုံးတွေကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးကြမလဲ?
၄။ မိခင် စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း
သောကများနေတဲ့လူတစ်ယောက်က ကျန်းမာရေးကောင်းနိုင်ပါ့မလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက် လူတိုင်းအဖြေကို သိပါတယ်။ ကလေးအမေမှာ ခံစားနေရသမျှကို ဟော်မုန်းတွေကဆင့် ကလေးလေးက သိပါတယ်။ မိခင်က စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခါ ထွက်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို ကလေးတွေက မနှစ်သက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ကာလမှာ မိခင်သောကမများရအောင် နေသင့်ပါတယ်။ အစကတည်းကလည်း ကြိုတင်စီစဉ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၅။ အလင်းရောင် စူးခြင်း
တူတူရေ ဝါး ဆော့သလိုမျိုး ဗိုက်ထဲကို ဓာတ်မီးနဲ့ ထိုးကြည့်ဖူးလား။ ဒါကိုတော့ ကလေးတွေ သိပ်ကြိုက်မယ် မထင်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဗိုက်ထဲက ကလေးတွေ အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဓာတ်မီးနဲ့ထိုးရင် လုံးဝ၊ လုံးဝ မကြိုက်မှာ ကျိန်းသေပေါက်ပါပဲ…
ယောင်းက ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ အိပ်မပျော်လို့ ဘာလို့ အလုပ်ကြောင့်မို့ စတာတွေနဲ့ အိပ်ချိန်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါ ဗိုက်ထဲက ကလေးမှာလည်း သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ယောင်း ခံစားနေရသလို ကလေးလည်း ခံစားရတဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ တတ်နိုင်သမျှ ပုံမှန်လေးအိပ်ပေးတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
အပူအစပ်တွေက မိခင်ရဲ့ချက်ကြိုးကနေ တစ်ဆင့် ကလေးဆီ ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့ ယောင်းတို့အားလုံး သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ နုနယ်လွန်းတဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက်တော့ ဒါတွေက သဘာကျ နှစ်သက်စရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ယောင်း အပူအစပ်စားပြီးရင် ကလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုက ပုံမှန်နဲ့ မတူဘူးဆိုတာရော ယောင်းတို့ ခံစားမိပါသလား?
စိတ်ဖိစီးမှု များတဲ့ မိခင်တွေလိုပါပဲ။ သင်ခံစားနေရသမျှကို ဟော်မုန်းတွေကနေတစ်ဆင့် ကလေးက သိကြားနေရပါလိမ့်မယ်။ မိခင်ကိုယ်တိုင်က စိတ်ဓာတ်ကျနေရင် ကလေးကလည်း ပျှော်ရွှင်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ သူများငိုတာမြင်ရင် ကိုယ်လည်း မျက်ရည်ဝဲသလိုပေါ့… ဒါတောင် မြင်ရတာပဲ ရှိသေးတာလေ.. ဟော်မုန်းကို တူတူခွဲနေရတဲ့ ကလေးလေးတွေက အဲဒီထက်ပိုတာပေါ့လို့…
မိခင်လောင်းဆိုတာ အာဟာရဓာတ်တွေ ပြည့်ဝနေရမယ့်သူတွေပါ။ အစားများများစား၊ လုံလောက်တဲ့ အနားယူမှုတွေ လုပ်ရမယ့်သူပါ။ ဒါကို မိခင်က အစာနဲ့ ဝေးနေပြီး ဘာမှအစားရသေးဘဲ ဗိုက်ဆာနေတယ်ဆိုရင်တော့ ယူ နည်းနည်း များဘီ လို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ ယောင်းတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘဲ အထဲက ကလေးလေးလည်း ဗိုက်ဆာတတ်တာမို့ ပုံမှန်လေး သတိထားပြီး စားပါ။ မိခင် အာဟာရပြည့်မှ ကလေးဆီ ရောက်မှာမို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်လောင်းတွေ အစာအာဟာရ ပြည့်ဝဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်လို့…
ဒေါက်တာအောင်ကျော်မြင့် (ကျန်းကျန်းမာမာ by Alinker)
မသိဘဲ လုပျမိနတောတှေ ရှိရငျ ခုပဲ ရပျလိုကျတော့နျော…
ဗိုကျထဲက မမှေးသေးတဲ့ ကလေးတှကေ ခဈြတတျ မုနျးတတျလို့လားလို့ ယောငျးတို့က မေးလာစရာ ရှိပါတယျ။ ဒီမေးခှနျးရဲ့ အဖွကေတော့ ဟုတျကဲ့ ခဈြတတျ၊ မုနျးတတျကွပါတယျ ဆိုတာပါပဲ.. တကယျတော့ အကျဒျမငျတို့တှဟော မှေးကတညျးက အသိစိတျပါလာပွီးသားပါ.. လူကွီးတှလေောကျ မမှတျမိတာပဲ ရှိတာပေါ့နျော.. ဒီဆောငျးပါးမှာတော့ Mom Junction မှာ ဖျောပွထားတဲ့ ဗိုကျထဲက ကလေးလေးတှေ မကွိုကျတဲ့အရာတှကေို ဖျောပွပေးသှားမှာပါ ယောငျးတို့ရေ…
၁။ မိခငျ အူလိုကျသညျးလှိုကျရယျခွငျး
မိခငျလောငျးက ပြျောရှငျတတျတာ ကောငျးပါတယျ။ တဈခါ ပွုံးရငျ တဈရကျ အသကျရှညျတယျလို့ ဆိုရလောကျအောငျ ပြျောရှငျခွငျးက လူတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးကို အရမျး အထောကျအကူပွုပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဗိုကျထဲက ကလေးကတော့ အူလှိုကျသညျးလှိုကျရယျမောခွငျးကိုတော့ ကွိုကျမယျမထငျပါဘူး။ ဒီလိုရယျတာ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရငျ ကိုယျ့ကို ဖောငျးနတေဲ့ လအေိတျတဈခုထဲမှာ ထညျ့ထားပွီးအိတျကို ရမျးခါနသေလိုမြိုးပါပဲတဲ့။ ကဲ.. အခှီသနျတဲ့ မာမီလောငျး ယောငျးယောငျးတှေ သတိထားကွမေ 😛
၂။ ဗိုကျကို အမွဲ ပှတျနခွေငျး
မှေးခါနီး အခြိနျမှာ ကလေးကို ထိတှကေို့ငျတှယျရတာ ကွညျနူးစရာပါ။ ကလေးလေးကလညျး သဘောကမြှာ အမှနျပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ စဉျဆကျမပွတျ ကိုယျတှယျနတေယျဆိုရငျတော့ ကလေး ငွိုငွငျတာ ခံရပါတော့မယျ 😛 အထဲမှာ ကလေးဘယျလိုနနေမှေနျး မသိနိုငျတဲ့အတှကျ ကလေးကို အမွဲလိုလို ထိတှနေ့တောမြိုးကိုတော့ လြှော့သငျ့ပါတယျနျော.. ကိုယျ့တောငျ တဈခြိနျလုံး လာကိုငျနရေငျ မကွိုကျဘူးမလား 😀
ဒါကတော့ ရှငျးပါတယျ။ ယောငျးလညျး လမျးထဲမှာ ရုတျတရကျ ဟှနျး အကယျြကွီးတီးလိုကျတာမြိုးတို့၊ လျောသံနဲ့ နှိပျစကျတာတို့ မကွိုကျဘူးမလား.. ကလေးတှလေညျး ဒီလိုပါပဲ။ သူတို့မှာ ကွားနိုငျတဲ့ စှမျးရညျရှိတဲ့အတှကျ အသံကယျြလောငျတဲ့အရာတှကေို မုနျးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တတျနိုငျသမြှ ကိုယျဝနျဆောငျက ဆိတျငွိမျအေးခမျြးတဲ့နရောမှာ နထေိုငျသငျ့ပါတယျ။
Related Article >>> ကလေးငယျတှရေဲ့ အိပျယာခငျး၊ စောငျ၊ ခေါငျးအုံးတှကေို ဘယျလို သနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးကွမလဲ?
၄။ မိခငျ စိတျဖိစီးမှုမြားခွငျး
သောကမြားနတေဲ့လူတဈယောကျက ကနျြးမာရေးကောငျးနိုငျပါ့မလား ဆိုတဲ့မေးခှနျးအတှကျ လူတိုငျးအဖွကေို သိပါတယျ။ ကလေးအမမှော ခံစားနရေသမြှကို ဟျောမုနျးတှကေဆငျ့ ကလေးလေးက သိပါတယျ။ မိခငျက စိတျဖိစီးမှုမြားတဲ့အခါ ထှကျတဲ့ ဟျောမုနျးတှကေို ကလေးတှကေ မနှဈသကျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ ကာလမှာ မိခငျသောကမမြားရအောငျ နသေငျ့ပါတယျ။ အစကတညျးကလညျး ကွိုတငျစီစဉျဖို့ လိုအပျပါတယျ။
၅။ အလငျးရောငျ စူးခွငျး
တူတူရေ ဝါး ဆော့သလိုမြိုး ဗိုကျထဲကို ဓာတျမီးနဲ့ ထိုးကွညျ့ဖူးလား။ ဒါကိုတော့ ကလေးတှေ သိပျကွိုကျမယျ မထငျပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ ဗိုကျထဲက ကလေးတှေ အိပျနတေဲ့အခြိနျမှာ ဓာတျမီးနဲ့ထိုးရငျ လုံးဝ၊ လုံးဝ မကွိုကျမှာ ကြိနျးသပေေါကျပါပဲ…
ယောငျးက ဘာရယျမဟုတျဘဲ အိပျမပြျောလို့ ဘာလို့ အလုပျကွောငျ့မို့ စတာတှနေဲ့ အိပျခြိနျပွောငျးလဲလိုကျတဲ့အခါ ဗိုကျထဲက ကလေးမှာလညျး သကျရောကျမှုတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ ယောငျး ခံစားနရေသလို ကလေးလညျး ခံစားရတဲ့အတှကျ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ တတျနိုငျသမြှ ပုံမှနျလေးအိပျပေးတာ အကောငျးဆုံးဖွဈမှာပါ။
အပူအစပျတှကေ မိခငျရဲ့ခကျြကွိုးကနေ တဈဆငျ့ ကလေးဆီ ရောကျနိုငျတယျဆိုတာတော့ ယောငျးတို့အားလုံး သိပွီးသားဖွဈပါလိမျ့မယျနျော။ နုနယျလှနျးတဲ့ ကလေးငယျတှအေတှကျတော့ ဒါတှကေ သဘာကြ နှဈသကျစရာတှေ မဟုတျပါဘူး။ ယောငျး အပူအစပျစားပွီးရငျ ကလေးရဲ့ လှုပျရှားမှုက ပုံမှနျနဲ့ မတူဘူးဆိုတာရော ယောငျးတို့ ခံစားမိပါသလား?
စိတျဖိစီးမှု မြားတဲ့ မိခငျတှလေိုပါပဲ။ သငျခံစားနရေသမြှကို ဟျောမုနျးတှကေနတေဈဆငျ့ ကလေးက သိကွားနရေပါလိမျ့မယျ။ မိခငျကိုယျတိုငျက စိတျဓာတျကနြရေငျ ကလေးကလညျး ပြှျောရှငျနိုငျမယျ မထငျပါဘူး။ သူမြားငိုတာမွငျရငျ ကိုယျလညျး မကျြရညျဝဲသလိုပေါ့… ဒါတောငျ မွငျရတာပဲ ရှိသေးတာလေ.. ဟျောမုနျးကို တူတူခှဲနရေတဲ့ ကလေးလေးတှကေ အဲဒီထကျပိုတာပေါ့လို့…
မိခငျလောငျးဆိုတာ အာဟာရဓာတျတှေ ပွညျ့ဝနရေမယျ့သူတှပေါ။ အစားမြားမြားစား၊ လုံလောကျတဲ့ အနားယူမှုတှေ လုပျရမယျ့သူပါ။ ဒါကို မိခငျက အစာနဲ့ ဝေးနပွေီး ဘာမှအစားရသေးဘဲ ဗိုကျဆာနတေယျဆိုရငျတော့ ယူ နညျးနညျး မြားဘီ လို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ ယောငျးတဈယောကျတညျး မဟုတျဘဲ အထဲက ကလေးလေးလညျး ဗိုကျဆာတတျတာမို့ ပုံမှနျလေး သတိထားပွီး စားပါ။ မိခငျ အာဟာရပွညျ့မှ ကလေးဆီ ရောကျမှာမို့ ကိုယျဝနျဆောငျ မိခငျလောငျးတှေ အစာအာဟာရ ပွညျ့ဝဖို့လညျး လိုအပျပါတယျလို့…
Tags: behaviours, care, Connect, Don't Like, Health, KKMM, Pregnant
For Her Myanmar January 9, 2019